Ego ole ka ụmụ akwụkwọ kọleji nwere ADHD na-erite na ntụleghachi ọmụmụ ha? - Nzuzo
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Ego ole ka ụmụ akwụkwọ kọleji nwere ADHD na-erite na ntụleghachi ọmụmụ ha?
A makwaara mmeghachi omume nke ADHD ka o buru na muta mahadum; studentsmụ akwụkwọ mahadum nwere ADHD, n’ezie, nwere akara akara dị ala na o yighị ka ha ga-agụcha agụmakwụkwọ ha. Otu n'ime ihe ndị nwere ike ime ka nke a nwee ike ịbụ enweghị ike ịchịkwa akparamagwa mmụta mmadụ.
Usoro mmụta bara uru karịsịa ugboro ugboro mgbake nke ozi amụrụ, nke ga-ejikọta ya na ọtụtụ echiche ndị agbakọtara na ebe nchekwa ogologo oge karịa ka ọ ga-adị na nnọkọ ọmụmụ ma ọ bụ ịgụ otu ugboro ugboro otu isiokwu.. Inye oge nkwenye ma ọ bụ nwalee onwe gị na ihe a mụrụ (dịka ọmụmaatụ, ya na kaadi kaadi) ga-eme ka akụkụ ihe omimi ya na mmata ya mata banyere ihe a mụtara.
Nyere nsonaazụ nke usoro ọmụmụ ahụ a kpọtụrụ aha na isi ike ndị metụtara ndi isi oru mgbe nile na ndi mmadu na ADHD, Knouse na ndị ọrụ ibe chọrọ nyocha ma ndị nwere ADHD nwere ike irite uru site na nnweghachị ozi ugboro ugboro iji mee ka mmụta dị na ebe nchekwa.
Ndị ọkà mmụta ji ihe atụ nke ndị mmadụ mejupụtara ụmụ akwụkwọ kọleji 58 na ADHD na ụmụ akwụkwọ kọleji 112 na-enweghị ADHD. E kewara usoro ahụ niile ụzọ abụọ:
Otu bụ free ịmụta Nkọwa nke isi okwu n'ụzọ ọ chere kacha mma.
Ndi nke ozo gha aghaghi idi oge o nweghi megharịa nkọwa nke ọ bụla ugboro atọ.
A nwalere ndị niile nọ n'omume ahụ ka otu izu gachara ka ha tụọ ọkwa mmụta a rụzuru.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Nkpali na njide onwe onye - Nyocha ahụ
N'adịghị ka atụmanya dị, n'ime otu ọ bụla enweghị ọdịiche dị n'etiti ụmụ akwụkwọ nwere ADHD na-enweghị ADHD. Fọrọ nke nta, ụmụ akwụkwọ nwere ADHD nwere ike ịmụta dị ka ndị ọzọ, ma ọ bụ jiri aka ha na-achịkwa usoro mmụta nke ha, ma ọ bụ na-eji atụmatụ ndị ọzọ tiri (weghachite nyocha ugboro atọ nke otu echiche ahụ).
Kaosinadị, akụkụ abụọ dị mkpa kwesiri iburu n'uche:
Nke mbụ bụ na imuta ihe site na imeta ihe uzo ato izi ezi nke otu nkpoko odi odi nma karie igu akwukwo n’onwe ya (mana anyị ga-ekwu maka nke a n’edemede ọzọ).
Akụkụ nke abụọ dị mkpa gbasara oke nyocha a. Ndị sonyere ADHD n'ihe ọmụmụ a nwere ike ọ gaghị abụ onye nnọchi anya n'ezie ebe ọ bụ na ha bụ ụmụ akwụkwọ mahadum. O kwere omume na enwere nha anya ịhọrọ ya, na, ọ bụ sọsọ ụmụakwụkwọ mahadum ka etinyechara n’omume ahụ, ndị ADHD ahọpụtara dị ka ndị ọrụ ha. Enyere akụkụ nke nsogbu a site na nnwale okwu a na-eji na-eme atụmatụ iji nweta okwu IQ.
Nkọwa nke nsonaazụ ndị a kwesiri ya oke ụmụ akwụkwọ mahadum Ndị America, na-etinye oke nlezianya na ịgbatị ya na ọnụ ọgụgụ ndị okenye niile na ADHD.
Ngwa anyị na-akwụghị ụgwọ na nlebara anya na ọrụ ndị isi
Ka anyị kwuo banyere nlebara anya
DuPaul, GJ, Weyandt, LL, O'Dell, SM, & Varejao, M. (2009). Studentsmụ akwụkwọ kọleji nwere ADHD: Ọnọdụ dị ugbu a na usoro ọdịnihu. Journal nke ntị, 13(3), 234-250.
Knouse, LE, Rawson, KA, & Dunlosky, J. (2020). Ego ole ka ụmụ akwụkwọ kọleji nwere ADHD na-erite uru site na omume mweghachi mgbe ha na-amụta ịkọwa okwu isi? Mmụta na nkuzi, 68, 101330.
Nugent, K., & Smart, W. (2014). Ntị ntị / adịghị ike n'ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ọrịa Neuropsychiatric na ọgwụgwọ, 10, 1781.
Rowland, CA (2014). Mmetụta nke nnwale na njidere na njigide: nyocha nke meta-nyocha nke mmetụta nnwale. Akwukwo ndi ozo, 140(6), 1432.
adhd, ADHD na mmụta, ADHD na mahadum
Ego ole ka ụmụ akwụkwọ kọleji nwere ADHD na-erite na ntụleghachi ọmụmụ ha?2020-05-092020-05-09http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/05/gli-studenti-universitari-con-adhd-quanto-beneficiano-dal-ripasso-nello-studio.jpg200px200px